Faritra Vatovavy Fitovinany: tsara sy mitombo ny vokatra tantely | NewsMada
Faritra Vatovavy Fitovinany: tsara sy mitombo ny vokatra tantely
Manomboka miverina tsikelikely ny fahatsaran’ny vokatra tantely, indrindra any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Vatovavy Fitovinany, nanomboka ny taona 2015. Eo ny Federasiona iombonan’ny mpamokatra tantely manohana amin’ny lafiny teknika sy ny varotra.
Raha any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany manokana, inenina isan-taona izy ireo ny mamokatra tantely, ankamaroan’ny vokatra aondrana any Eoropa. Najoro ny Miellerie des Pangalanes, ny taona 2013 ao Manakara, tohanan’ny Vondrona eoropeanina, manampy ireo mpiompy. Nanomboka teo, natao laharam-pahamehana ny famokarana tantely, anisan’ny lalam-pihariana ahazoana tombony betsaka sy mitondra fahasalamana ho an’ny olombelona, antony hitadiavan’ny tsena any ivelany azy betsaka.
Raha kely indrindra, 500 litatra isaky fotoam-pamokarana, 30 000 litatra mandritra ny taom-pamokarana ny any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany. Marihina fa vokatra mbola tsy voadio ireo fa manadio kosa ny ao amin’ny Miellerie des Pangalanes mialoha ny hanondranana azy. Misy ihany ireo mpanagom-bokatra mandray ny vokatra mbola tsy voadio, ka eo matetika miteraka olana raha tsy mifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena.
Manodidina ny 45 % ny ho an’ny tsena anatiny, aondrana any ivelany ny sisa, izay mbola tsy ampy raha ny tinady any amin’ny tsena eoropeanina. Tsy manome tombony ho an’ny lalam-pihariana raha vokatra mbola tsy voadio ny aondrana. 10 000 Ar hatramin’ny 12 000 Ar ny litatra ny handraisan’ireo mpanangom-bokatra azy.
Tsara ny vokatra nanomboka 2015
Manana tontolo voajanahary tsara mety amin’ny fiompiana tantely ny morontsiraka manontolo atsinanan’ny Nosy. Betsaka izao ny fiompiana atao amina fototra letisia, ankoatra ireo karazan-kazo mahazatra. Tsy nitsaha-nitombo ny vokatra manerana ny Nosy, nanomboka ny taona 2015, 4 400 t ; ny 2016, 7 600 t ; 14 000 t ny 2017 ; 15 400 t ny 2018, noho ny fanarahan’ireo mpiompy ny toromarika teknika maoderina. Nialana miandalana ny fomba fiompiana tranainy. Nomena torolalana koa izy ireo miady amin’ny aretina “varoises”, manimba ny fiompiana. Nahakivy ny mpiompy io karazana aretina io tany aloha, nahatonga ny sasany niala tamin’ny lalam-pihariana fiompiana tantely.